Ny tantaran'ny fahaterahana lehibe indrindra - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Ny tantara fiterahana lehibe indrindra
Vao teraka aho tany amin'ny Pensacola, Hopitaly Navy any Florida, dia tsy nisy olona nahalala fa tao amin'ny toerana famokarana mandram-pahafatiko ny dokotera aho. Tokony ho 20 isaky ny zaza kely dia tsy mandry eo an-kibo raha vao teraka. Soa ihany, fe-potoana breech tsy midika avy hatrany hoe tsy maintsy aterina an-jaza miaraka amin'ny fizarana caesarean ny zaza. Tamin'izay fotoana izay dia tsy ela akory taorian'ny nahaterahako ary tsy nisy olana hafa. Ity hetsika ity dia nanome ahy ny anaram-bosotra hoe "tongotra frog".
Samy manana ny tantarany ny fahaterahany. Faly ny ankizy mianatra bebe kokoa momba ny nahaterahany ary ny reny dia te hilaza amin'ny an-tsipiriany ny fomba nahaterahan'ny zanany. Fahaterena ny fahaterahana ary matetika dia mitomany ny mason'ireo efa nanana traikefa.
Na dia haingana aza ny ankamaroan'ny fiterahana dia tsy afaka hadino mihitsy. Avy ety ivelany dia fahita andavanandro ity fahaterahana ity, saingy ny lanjany dia tsapa manerana an'izao tontolo izao ary mbola misy fiantraikany amin'ny olombelona rehetra maneran-tany izany.
Rehefa teraka Jesosy dia tonga Emmanuel - Andriamanitra miaraka amintsika. Mandra-pihavin'i Jesosy dia momba antsika amin'ny fomba manokana Andriamanitra. Izy dia niaraka tamin'ny olona tao amin'ny andry rahona nony andro sy andry afo tamin'ny alina ary niaraka tamin'i Mosesy tao amin'ilay roimemy nirehitra.
Saingy ny nahaterahany ny maha-olombelona azy dia nahasarika azy. Io fiterahana io dia nanome maso, sofina ary vava. Niara-nisakafo taminay izy, niresaka taminay, nihaino anay, nihomehy ary nikasika anay. Nitomany izy ary niaina fanaintainana. Tamin'ny alàlan'ny fijaliany sy ny alahelony, dia azony ny fahafantarantsika ny fahoriantsika sy ny alahelontsika. Niaraka taminay ary izy no iray taminay.
Tamin’ny fahatongavana ho anisantsika, dia namaly ilay fitarainana tsy tapaka i Jesosy hoe: “Tsy misy mahalala Ahy”. Ao amin’ny Taratasy ho an’ny Hebreo Jesosy dia voalaza fa mpisoronabe izay miara-mijaly amintsika sy mahafantatra antsika satria niharan’ny fakam-panahy mitovy amintsika Izy. Izao no lazain’ny fandikan-tenin’i Schlachter: “Satria manana Mpisoronabe lehibe isika, dia Jesosy, Zanak’Andriamanitra, izay efa niampita ny lanitra, dia aoka isika hihazona ny fanekena. Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahazaka ny fahalementsika, fa efa nalaim-panahy tamin’ny zavatra rehetra tahaka antsika, nefa tsy nanota. » (Hebreo) 4,14- iray).
Fijery miezinezina sy mamitaka be izany dia mipetraka ao amin'ny tilikambo ivory any an-danitra ary tena lavitra antsika Andriamanitra. Tsy marina izany, tonga tamintsika ny Zanak'Andriamanitra mba ho iray amintsika. Andriamanitra momba antsika dia mbola eto amintsika ihany. Rehefa maty Jesosy dia maty, ary rehefa nitsangana izy dia niara-nitsangana taminy koa.
Ny nahaterahan'i Jesosy dia tsy ny tantaran'ny olona iray teraka teto amin'izao tontolo izao ihany. Fomba manokana nomen'Andriamanitra antsika hampisehoana antsika fa tena tia antsika izy.